पहिलो प्रेम विवाहित पुरुषसँग गरेकी नायिका कमली ११ बर्षदेखि दोस्रो प्रेममा (भिडियो सहित) - Medianp.com
शनिबार, १६, बैशाख, २०७४	समाचार
पहिलो प्रेम विवाहित पुरुषसँग गरेकी नायिका कमली ११ बर्षदेखि दोस्रो प्रेममा (भिडियो सहित)
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २७, २०७३१४:२४0	काठमाडौं, २७ पुस । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुन पछिल्लो समय दर्जनाैँ कलाकार संघर्षरत छन् । चलचित्र क्षेत्रमा आफूलाई परिचित र स्थापित गराउन कठिन छ ।
यस्तै मध्येकी एक हुन्– कमली वाइवा । नेपाली चलचित्र भिमदत्तबाट रजतपटमा डेब्यु गरेकी नायिका कमली वाइवा आफूलाई नायिकाको रुपमा स्थापित गराउनलाई संघर्ष गरिरहेकी छिन् । करिब १८ बर्षदेखि हङकङमा बसोबास गर्दै आएकी कमलीको सपना पनि नायिका बन्नु नै हो । उनले हङकङ बस्ने क्रममा पनि चार वटा म्यूजिक भिडियो गरिसकेकी छिन् भने भिमदत्त नामक चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । अहिले उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘शब्द’ प्रदर्शनको क्रममा रहेको छ । जुन यहि पुस २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको छ ।
चलचित्र शब्दको लागि उत्साहित रहेकी कमली यस चलचित्रबाट आफ्नो करियर उकालो लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउँछिन् । ‘चलचित्रमा मेहनत गरेको छु । काशी नामक भूमिका रहेको छ। सौगात मल्लसँग अपोजिट रहेर काम गर्न मौका पाएँ । मेरो काम र मेहनतलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु ।’
कमलीलाई सौगात मल्ल मन पर्ने कलाकार हुन् । उनीसँग रोमान्स गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँछिन् । ‘सुरुमा मलाई थाहा थिएन चलचित्रमा सौगात मल्लसँग काम गर्दैछु भनेर । जब निर्देशकले काममा सौगात पनि छ भन्दा डरको साथमा खुसी पनि लाग्यो । चलेका कलाकारसँग काम गर्न चुनौती हुन्छ । उहाँको फ्यान हुँ म । घमण्डी हुनुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ । तर, जब भेट भयो उहाँ जस्तो सरल मान्छे मैले देखेको थिइँन् । एकदमै मिलनसार र सहयोगी हुनुहुन्छ सौगात मल्ल’, सौगात मल्लसँग पहिलो भेटको अनुभव सुनाइन् कमलीले ।
कमली वाइवा चलचित्र शब्दकी मुख्य पात्र हुन् । उनीसँग चलचित्रमा प्रेममा पर्ने धेरै छन्, तर रियल लाईफमा कति छन् त ? उनी भन्छिन् ‘११ बर्ष भयो एक जनाको प्रेममा परेको । ’ रजतपटमा आइराख्ने विभिन्न समाचारबाट भने कहिले काहीँ उनका प्रेमी रिसाउँछन् रे । ‘विभिन्न विषयमा आइरहने समाचारका कारण रिसाउनु हुन्छ तर अहिले बुझ्ने हुनु भएको छ, यो क्षेत्र नै यस्तो हो भनेर । अहिले फकाउन पनि सजिलो भएको छ’, कमली सुनाउँछिन् ।
प्रेमको बारेमा कुरा गर्र्दै जाँदा कमलीको पहिलो प्रेम भने एक जना विवाहितसँग भएको थियो रे । ‘पहिलो प्रेम एक जना विवाहितसँग परेको थियो । उहाँलाई थाहा थिएन । एकदमै राम्रो हुनुहुन्थो । घरको छतमा आइराख्नु हुन्थ्यो । एकतर्पी प्रेम बसेको थियो । पछि थाहा पाए उहाँ त एक बच्चाको बुवा पो हुनुहुँदो रहेछ ।’
लामो समय हङकङमा बस्दै आएकी कमली चलचित्र निर्माण गर्न सोचमा छिन् । ‘नेपालमा नै बस्ने मिलाउँदैछु । चलचित्र निर्माण गर्न सोच छ । हेर्दे जाउ के हुन्छ’, उनले भनिन् ।
हिउँ फाल्दै टहरो बनाउँदै लाप्राकीनागरिकस्तरमा मनाइयो पृथ्वी जयन्ती, पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण (भिडियो सहित)
अनमोलको फिल्म ‘कृ’ को सुटिङ सुरु, पहिलो दिननै नायिका गायब
‘बाहुबली २’ को अग्रिम टिकट किन्न १३ किलोमिटरसम्म लाइन
कुनै समयमा यस्ती थिइन्, ‘बाहुबली’की शिवगामी
नम्रता श्रेष्ठ र कोशिश क्षेत्री द्वारा अभिनेती फिल्म ‘पर्व’ को ट्रेलर रिलिज
‘अवतार’ को चार सिक्वेलको रिलिज डेट एकैपटक घोषणा
ब्लड क्यान्सरका कारण बलिउड अभिनेता विनोद खन्नाको निधन
ताजा पोस्ट देउवाको प्रस्ताव ओलीद्वारा ठाडै अस्वीकार
६ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी १ बाफरे कति महंगो पानी ! पूरै घरबारी बेच्दा पनि एक लीटर आउँदैन
६ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी १ चाँदीको मन्डपमा यसरी गरे नेपाली उधोगपति विनोद चौधरीले छोरा बरुणको विवाह (फोटो सहित)
७ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी १ सुन्दर हुनुपनि अभिशाप ! सरकारले नै लगायो चलचित्र खेल्न प्रतिवन्ध
८ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी १ प्योङयाङ माथि आक्रमण भए पृथ्वी नै टुक्रिने उत्तर कोरियाको चेतावनी
९ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी १ जनकपुरमा दैनिक रु २५ लाखको आलु प्याज खपत
१० घण्टा अगाडि मिडिया एनपी १ जनकपुरमा दैनिक २५ लाखको आलु प्याज खपत
१० घण्टा अगाडि मिडिया एनपी ९ निर्वाचनमा होमिनुको अर्को बिकल्प छैन
११ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी ९ खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो, वार्षिक ३९ अर्बको खाद्यान्न आयात
११ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी ९ एक किलो सुनसहित तीन पक्राउ
११ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी ९ बैदेशिक कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले २ लाख धरौटी राख्नुपर्ने
११ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी ९ पाँचौ दक्षिण एसियाली ट्राइथोलन च्याम्पियनशीप २०१७ को उपाधी भारतका गुरुदत्त र पल्लवी रेतिवालालाई
११ घण्टा अगाडि मिडिया एनपी ९ Deep Creation Pvt. Ltd Address: Anamnagar, Kathmandu, Nepal. Email: [email protected] Phone: +977-01-4254053